Ampidino Kaspersky Free Antivirus ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (3.40 MB)
Ampidino Kaspersky Free Antivirus,
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) dia antivirus maimaim-poana sy haingana ho anny mpampiasa Windows Windows hisintona. Kaspersky Free Antivirus 2020 no azo antoka indrindra aminireo programa antivirus maimaim-poana.
Sintomy ny Kaspersky Free Antivirus
Kaspersky Security Cloud Free dia iray aminireo programa antivirus maimaim-poana ho anny Window. Fiarovana antivirus maimaimpoana vaovao dia miaro aminny viriosy ao aminny solo-sainao PC sy Android, mitahiry sy miaro ny teny miafinao, antontan-taratasy manokana, manafina ny angon-drakitra alefanao sy azonao aminny Internet miaraka aminny VPN
Kaspersky Security Cloud dia miaraka aminny teknolojia fiarovana maimaimpoana ary manadihady avy hatrany ny angon-drakitra momba ny fandrahonana vaovao hanampiana anao hiaro ny PC sy ny fitaovana finday aminny loza isan-karazany. Ny programa antivirus maimaim-poana, izay manao scanning sy manadio, dia miaro ny solosainao PC sy ny findainao, ao anatinizany ny iPhone-nao, aminireo viriosy, fisie voa, fampiharana mampidi-doza ary toerana mampidi-doza. Ity fitaovana antivirus ity dia manome fiarovana nefa tsy manelingelina ny asanao. Ny fanavaozana dia alaina ho azy; midika izany fa voaro hatrany aminny fandrahonana vaovao ianao.
Ny Kaspersky Security Cloud Free dia miaro anao aminny viriosy aminny fitaovanao rehetra. Ny kinova maimaim-poana dia manolotra fiarovana antivirus ihany. Misy ny kinova misy endri-javatra mandroso toy ny VPN, mpitantana teny miafina, fanaraha-maso ny tambajotra Wi-Fi an-trano, vola azo antoka (fiarovana aminny fivarotana an-tserasera sy aminny fifanakalozana Internet), fiarovana ny zaza.
Haben'ny rakitra: 3.40 MB